ဝဇိရာဝုဓ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဝချိယာဝုဒ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ရာမ ၆ ဘုရင်
23 October 1910 – 26 November 1925
ပြဇာဓိပက (ရာမ ၇)
(1881-01-01)၁ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၈၈၁
တော်ဝင်နန်းတော်၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
၂၆ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၉၂၅(1925-11-26) (အသက် ၄၄)
စုဠာလင်္ကရဏ (ရာမ ၅)
ဝဇိရာဝုဓ (ထိုင်း: วชิราวุธ; RTGS: ဝဂျိရာဝုဓ်) (၁ ဇန်နဝါရီ ၁၈၈၁ – ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၅) သည် ရှမ်းပြည်၊ စကြီမင်းဆက်၏ ၆ ယောက်မြောက် ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၁၉၁၀ ဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်စဉ်မှ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၅ နတ်ရွာစံသည် အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ နတ်ရွာစံချိန်တွင် သက်တော် (၄၄)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ဘုရင် ဝဇီရာဝုဓ သည် ရှမ်းအမျိုးသားရေးဝါဒကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှု နှင့်ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း တိုင်းပြည်ဆုံးရှုံမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှု တို့ကြောင့် ထင်ရှားသည်။
ဘုရင်ချူလာလောင်ကွန်း (ရာမ၆)၏ ၂၉ ယောက်မြောက်သားတော်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါဒုတိယမြောက်မွေးဖွားခဲ့သည် မြင့်တော်ရ မင်းသမီးမဟာ ကျကရီသီရိဒုံသည် တော်ဝင်ထောင်စုနှစ်တော်ဝင် ဘုရင်မင်းမြတ်သည်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် 
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရ မင်းသား ပဟုရတမနမိုင် ကရောမ်ဗြထေပထိရာတ်(၁၈၇၈-၈၇)
ရှင်ဘုရင် ရာမ၅ ကို (၂၄၈၀ -1925 ဗ.သ. )
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသား တြိဖေချထံရောင် (၁၈၈၁ - ၁၈၈၇)
Field Marshal Somdej Chetthathirat မင်းသား ကျကရာပေါင်စီဖုဝနတ် ကရောမ် လုအင် ဖိတ်သနုလောက် ပြချနတ် (၁၈၈၂-၁၉၂၀)
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရ သီရိရာဇ်အထိမ်းအမှတ်များ (၁၈၈၅-၁၈၈၇)
ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သောမ္ဒေက်ျဗြအနုချထိရာတ် မင်းသား အစဒင် ဒေချဝုတ် ကရောမ် လုအင် နခေါန် ရချသိမာ(၁၈၈၉-၁၉၂၄)
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသားချုထထုတ္ထရဓိလောက် ကရောမ် ခုဏ် ဖေချဘုန် အင်ဒြာချိုင် (၁၈၉၂-၁၉၂၃)
left|thumb|210x210px| သူမ၏တော်ဝင် High ၏ရာထူးရှိခြင်းနေစဉ် Krom Khun ထေပ် ဒဝါရဝတီ မွေးဖွားရင်တောင် ဘုရင်မင်းမြတ်သည်ရာထူးကိုရယူထားဆဲဖြစ်သည် ရာဇဒေဝီ Empress Dowager ရာထူးကိုမရရှိသေးသော်လည်းရိုးရာအစဉ်အလာအရဘုရင် ရာမ၅ နန်းစံစဉ်က မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသားနှင့်သမီးသည် ထိုခေတ်အခါကမြင့်မြတ်မှုဖြစ်သည်။ သူ၏မူလခေါင်းစဉ်မှာသူ၏ မြင့်မြတ်မှုဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာသူ့ဘုရင်မင်းမြတ်ဘုရင်၏အပြည့်အဝတိုးတက်မှုနှုန်း ဘုရင်မင်းမြတ်သည်ကျေနပ်အားရစွာဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည်။ သူ့တော်ဝင်ဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတော်ဝင်ရေတပ်အတွက်အခမ်းအနားနဲ့အခမ်းအနား၏တည်နေရာ။ မင်းသား မဟာဝဇိရာဝုဓ် သို့သော်တော်ဝင်အမည်မပေးခဲ့ပါဘူး, တော်ဝင်အမည်ကိုကျင်းပ တော်ဝင်မင်းသားမင်းသမီးနှင့်မင်းသမီးမိခင်ဖြစ်သူ Luk Tho ဟုခေါ်သောမင်းသမီးမိဖုရား Prayun သည်တော်ဝင်နန်းတော်မှဆွေမျိုးများဖြစ်ပြီးဘုရင်၏ခြေရာအတိုင်းလိုက်ကြသည်။ "သူ၏ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးထွားလာသည်" 
နောက်ပိုင်းမတ်လ ၂၄၃၁ ကြာသပတေးနေ့ ၁၄ ရက် (လက်ရှိပုံစံကို ၂၄၃၂ B.E. အဖြစ်သတ်မှတ်သည်) တွင်သူတည်ထောင်ခဲ့သည် မြင့်မြတ်သည့် တော်ဝင်ဘွဲ့ရ မင်းသာမဟာဝချိယာဝုဒ်ဧက်အဂ္ဂEမဟာပုရုၑပရောမ်နရာဓိရာဇ်ာချူလာလောင်ကွန်း နာရာတ်ရာချဝေါရာရော့တ်t မသောမ္မတိကခတ္တိယဗိသုန္ဒြိ ပရောမ္မကုဋ်သုရိယသန်တိဝေါင်ၐ် အဒိသိုင်ဗေါင်ၑဝရောပေါသုချာတ် ခုဏ်သင်္ကာၑ ဝိမောရတန ဒၒခ်(ဒွစ်)ချနောမ်သဝသ်ဒိ ပခုဂက္ကူခေါင်းဆောင်မစ္စစက္ကန်းဝီမွန်ရတ်တနနီယာရာကွန်းနဝ၀တီဒီယာ ထိုအအဖြစ် receivership ခန့်အပ်ခဲ့သည် Krom Khun Thep Thawarawadi ပြီးနောက်, ဒုတိယဂုဏ်အသရေကိုလက်ခံရရှိ သရဖူ မင်းသား Mahawajirunhit Crown Prince  
ဝချိရာ အပါအဝင်သူ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကဘုရင်ကို ရာမ၆ ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, တော်ဝင်ခေါင်းစဉ် ပလ္လင်တော်ရှေ့၌၏ဘွဲ့ Sarawut အဖြစ်လျှပ်စစ်ဆိုလိုတာက "a"ကို "မဟာဝဇိရာဝုဓ် " ရှိခဲ့သည် Indra အဆိုပါ ဝဇိရာပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်တံဆိပ်ခတ်။ ဘဲဥပုံ ပုံသဏ္ဌာန်သည်အကျယ် ၅.၅ စင်တီမီတာရှိပြီး ၆.၈ စင်တီမီတာရှည်သည်။ တောက်ပသော ဝဇိရာဝုဓ ပုံစံရှိသည်။ ပန်แ wen ฟ ga ဒုတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပြဋ္ဌာန်း, နှစ်ဖက် flanking A ဆင့်ဂြိုဟ်တုရှိ 
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသားမဟာဝဇိရာဝုဓ(၁၈၈၁ ဇန်နဝါရီ ၁ - ၁၈၈၈ မတ် ၁၄)
မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရမင်းသမီး မဟာဝဇိရာဝုဓ ကရောမ်ခုန်ဒေဗဒွာရဝတီ (၁၈၈၈ မတ် ၁၄ ရက်မှ ၁၈၉၅ ဇန်နဝါရီ ၄)
အိမ်ရှေ့မင်းသားဘုရား ဝချိရာလောင်ကွန်း (၁၈၉၅၊ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် - ၁၉၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၃)
အစိုးရကိုဆက်ခံသောသရဖူ (၁၉၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၃ - ၁၉၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၅)
ဘုန်းတော်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူလှသည့်ဘုရင် မဟာဝချိရာဝုဒ် ဗြမောင်ကုဋ်က္လော့ဝ်ကျော့ဝ်ယူဟုဝါး(၁၉၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် - ၁၉၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်)
ဘုန်းတော်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူလှသည့် ရာမာဓိပတိၐြီသိန္ဒြ မဟာဝချိရာဝုဒ် ဗြမောင်ကုဋ်က္လော့ဝ်ကျော့ဝ်အ'ယူဟုဝါး၊ ဘုရင်ရာမ ၆ (နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် - ၁၉၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၆)
လန်းဗုဒ္ဓပုံရိပ် ၎င်းသည် ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကျောက်မျက်ရတနာဖြင့်အလှဆင်ထားသောကြွေထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတံတွေးအောက်တွင်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့် ၇ ဦး ခေါင်းနာဂကိုယ်ထည်ရှိဗုဒ္ဓရုပ်ပုံဖြစ်သည်။ တိုင်ထိပ်၏အမြင့် ၂၀.၇၀ စင်တီမီတာ၊ အဆိုပါရဲတိုက်ရဲတိုက်ကို, လက်ျာ Chakri ပလ္လင်ခန်းမ
၁၉၂၅ မှ ၁၉၃၂ ခုနှစ်ခန့် တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် သည်ပေါင် ၇.၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ အကျယ်နှင့်ကိုယ်ထည်မှာ ၁၂ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းအမြင့် ၃၉ စင်တီမီတာဖြင့် ရွှေ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ရွှေဖောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
link= ဝိတိုရိယ ဖြတ်သန်းဆင့်ဆု ( GCVO ) 
link= ရွှေသိုးမွေး၏အမိန့် အလွှာ Knights 
link= တံဆိပ် Leslie Donner, The Knight အတန်းအစား 
↑ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้ากรุงสยาม (บางตอน) และพระราชนิพนธ์อันเป็นสุดที่รัก เรื่อง พระนล คำหลวง, หน้า 18
↑ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการรับพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ, เล่ม ๕, ตอน ๕๐, ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๑๘๘๘, หน้า ๔๔๐
↑ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้ากรุงสยาม (บางตอน) และพระราชนิพนธ์อันเป็นสุดที่รัก เรื่อง พระนล คำหลวง, หน้า 19
↑ The London Gazette,
↑ ราชกิจจานุเบกษา, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จประเทศอิตาลี], เล่ม ๑๙, ตอน ๒๒, ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๔๔๙
↑ ราชกิจจานุเบกษา, พระเจ้าแผ่นดินกรุงสเปญพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๐,๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๑๖๖
↑ ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเมืองปารีศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๔๓, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๘๓๓
↑ ราชกิจจานุเบกษา, อรรคราชทูตเยอรมันเฝ้า ทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อรรคราชทูตอิตาลี แลราชทูตเบลเยียม เฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายพระราชสาส์น, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๒๑๕๙
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။2March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝဇိရာဝုဓ&oldid=747822" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၄:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။